Ahoana ny famerenana amin'ny laoniny ny Android taloha | Androidsis
Ny tsimbadika Android vaovao tsirairay dia misy fampiasa vaovao marobe, izay miaraka aminy fanatsarana ny fiarovana. Noho io antony io dia tsara foana ny mametraka ny Android farany misy amin'ny fotoana rehetra, miaraka amin'ireo fanavaozana ny fiarovana isan-karazany navoakan'ny mpanamboatra isam-bolana na telo volana.
Na izany aza, indraindray, ny terminal dia tsy mamaly fa tokony sy ny mety avereno amin'ny kinova Android. Ny zavatra voalohany tokony ho fantatsika momba ity fizotrany ity dia miankina amin'ny fiovana samihafa izay misy ny mpamokatra, ny fisian'ny kinova ...
1 Ahoana ny famerenana amin'ny laoniny ny Android taloha
1.1 Avereno amin'ny Samsung ny kinova Android taloha
1.2 Ampodio ny Huawei amin'ny Android taloha
1.3 Mamerina ny OnePlus amin'ny Android taloha
1.4 Avereno ny Oppo amin'ny Android taloha
1.5 Famerenana amin'ny laoniny Realme amin'ny Android taloha
1.6 Avereno ny Xiaomi amin'ny Android taloha
2 Tena mila miverina amin'ny Android taloha ve ianao?
3 Inona no dikan'ny hoe mamerina amin'ny Android taloha?
4 Aiza no misintona kinova Android taloha
Ny famerenana amin'ny kinova Android, araka ny efa nolazaiko tetsy ambony, dia dingana iray idiran'ny anton-javatra maro. Ny voalohany sy lehibe indrindra dia izay samy mampiasa fomba hafa ny mpanamboatra tsirairay Mba hanatanterahana an'io dingana io, ka miankina amin'ny mpanamboatra ny terminal antsika dia tsy maintsy manatanteraka dingana iray na hafa isika ary mampiasa rindranasa sasany sy hafa.
Na dia any amin'ny terminal sasany aza dia azontsika atao ny manatanteraka an'ity fizotrany ity amin'ny alàlan'ny fampidinana mivantana ny ROM amin'ny karatra fahatsiarovana, manasa antsika ny mpamokatra hafa mampiasa rindranasa solosaina hahafahana manatanteraka io fomba io. Raha araka ny mety, dia asehonay aminao, ny dingana tokony harahina mba hamerenana amin'ny Android taloha.
Avereno amin'ny Samsung ny kinova Android taloha
Nandritra ny roa taona, ny fampiharana izay ampiasain'ny Samsung ho an'ny mpanjifany hametraka kinova Android vaovao, ary koa ireo efa taloha, dia nantsoina hoe Odin ho Samsung Smart Switch, fampiharana izay azontsika sintonina maimaim-poana Ity rohy ity ary inona izany misy ho an'ny Windows sy Mac.
Raha vantany vao sintomina ity rindranasa ity sy ny kinova firmware an'ny fitaovana tiana hametrahana azy dia sokafinay ny rindranasa ary arahinay ireo dingana rehetra asehon'ilay fampiharana fa afaka manatanteraka ny Famerenana amin'ny Android taloha.
Ampodio ny Huawei amin'ny Android taloha
Ilay rindranasa natolotry ny mpanamboatra aziatika antsika hiverenana amin'ny Android taloha dia nantsoina Huawei HiSuite, fampiharana izay azontsika atao misintona maimaim-poana amin'ity rohy ity ary azo alaina amin'ny Windows sy Mac.
Ankoatry ny famerenana amin'ny laoniny Android taloha dia azontsika atao ihany koa backup copies, tantano ny angona rehetra voatahiry ao amin'ny fitaovantsika, avereno ny rafitra, apetraho ny fampiharana.
Mamerina ny OnePlus amin'ny Android taloha
Tsy toy ny mpanamboatra hafa manery antsika hampiasa rindranasa amin'ny solosaina, ny mpanamboatra OnePlus dia manamora kokoa ny fandehan-javatra, satria tsy mila maka tahaka ilay ROM izay tiana hapetraka fotsiny izahay. fitehirizana anatiny sy ivelany ny fitaovana.
Avy eo, rehefa novonoina ny finday avo lenta, tsindrio ny bokotra herinaratra miaraka amin'ny bokotra mamadika ny boky hiditra amin'ny menio fanombohana ny fitaovana, izay tokony hisafidianantsika ny safidy Recovery ary safidio ny toerana misy ilay rakitra izay misy ny ROM izay tianay hapetraka.
Avereno ny Oppo amin'ny Android taloha
Mihevitra fa samy Oppo sy OnePlus, anisan'ny vondrona iray ihany, ny fomba famerenana amin'ny laoniny ny Android taloha dia mitovy tanteraka amin'ny fitaovana roa. Ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia ny mandika ny sarin'ny kinova Android izay tianay haverina amin'ny tahiry fitaovana.
Avy eo, rehefa novonoina ny finday avo lenta, tsindrio ny bokotra herinaratra miaraka amin'ny bokotra mamadika ny boky hiditra amin'ny menio fanombohana ny fitaovana, izay tokony hisafidianantsika ny safidy Recovery ary safidio izay misy ilay rakitra voatahiry.
Famerenana amin'ny laoniny Realme amin'ny Android taloha
Ny fomba hamerenana amin'ny laoniny ny kinova taloha tamin'ny finday Android dia mitovy amin'ny Oppo sy OnePlus, satria ireo orinasa telo ireo dia ao anatin'ny vondrona orinasa iray ihany.
Raha vantany vao nadikanay ny ROM tamin'ny fitahirizana fitaovana dia vonoinay ilay fitaovana. Avy eo, tsindrio ny bokotra herinaratra miaraka amin'ny bokotra mamadika ny boky hiditra amin'ny menio fanombohana ny fitaovana, izay tokony hisafidianantsika ny safidy Recovery ary safidio izay misy ilay rakitra voatahiry.
Avereno ny Xiaomi amin'ny Android taloha
Raha raisintsika ny fitaovana marobe izay alefan'ny mpanamboatra aziatika isan-taona, dia mety ho iraka tsy azo atao ny mahita ny kinova Android ilaintsika. Raha tsara vintana isika mahita azy dia manohy kopia ny ROM amin'ny fakan'ny tahiry anatiny ny fitaovantsika.
Avy eo isika dia mankany amin'ny Fikirana ny fitaovantsika, kitiho ny fitaovako ary safidio Rafitra fanavaozana.
Manaraka, tsindrio ireo teboka telo mitsangana ary tsindrio Safidio ny fonosana fanatsarana, mifantina ilay rakitra izahay, izay nomenay anarana hoe update.zip ary hanomboka ny dingan'ny famerenana amin'ny laoniny.
Downgrade amin'ny Android, no teny ampiasaina amin'ny teny Anglisy hamerenana amin'ny Android taloha. Io no teny tokony hampiasanao hitadiavana ROM finday manokana amin'ny teny Anglisy, satria miankina amin'ny maodely, dia toa tsy hahita vaovao amin'ny teny espaniola ianao, na dia fiteny fahatelo be mpiteny indrindra eto an-tany ao ambadiky ny sinoa sy ny karana aza.
Tena mila miverina amin'ny Android taloha ve ianao?
Ny antony mety manery antsika hiverina amin'ny Android taloha, dia tokony handalo a tsy fahombiazan'ny fitaovana, indrindra rehefa fanavaozana voalohany.
Manome torohevitra anao foana izahay avy amin'ny Android Guides miandry andro vitsivitsy hahalala ny hevitry ny Earlyadopters ary amin'izay dia afaka manombatombana raha tena ilaina ny manavao na miandry andro vitsivitsy ny famahana ireo olana mety asehon'ny kinova vaovao.
Raha aorian'ny fanavaozana ny fitaovanao amin'ny Android Android vaovao dia nanomboka niasa tsy mandeha amin'ny laoniny izy io, misy lesoka, tsy fahampiana ary ianao irery no mpampiasa miaina an'io karazana olana io, dia azo inoana fa tsy ny kinova Android izany. nametraka ianao, fa fambara iray izay mila mamerina amin'ny laoniny ny fitaovanao ianao.
Rehefa mametraka kinova Android vaovao, dia tsara kokoa noho ny nanolorana azy io hatrany am-boalohany, izany hoe, famerenana amin'ny laoniny ny terminal avy eo am-boalohany. Amin'izany fomba izany, raha mijaly amin'ny alàlan'ny kinova Android ankehitriny izahay, tsy hotaritarihinay izany aorian'ny fanavaozana ny kinova Android vaovao.
Inona no dikan'ny hoe mamerina amin'ny Android taloha?
Ny dingana hamerenana amin'ny Android taloha, tsy azo ihodivirana izany hamafa ny atiny rehetra voatahiry ao amin'ny terminal, ka alohan'ny hanatanterahana an'ity dingana ity dia tsy maintsy manao kopia backup amin'ny atiny rehetra tadiavinay hotanana izahay.
Lafin-javatra iray hafa tsy maintsy raisintsika ny hoe tsy azo atao foana ny miverina amin'ny Android taloha. Ny mpanamboatra sasany dia manidy an'io fahafaha-manao io, toy ny Apple isaky ny fanavaozana vaovao izay avoakany avy amin'ny iOS.
Amin'izany fomba izany, ny mpanamboatra dia manome antoka fa ny terminal an'ny mpanjifa manana ny Android farany foana, miaraka amin'ny fanatsarana ny fiarovana rehetra efa nampiharina, ho fanampin'ny fiasa vaovao izay ampiana mba hahazoana tombony betsaka amin'ny fitaovana.
Aiza no misintona kinova Android taloha
Izany no iray amin'ireo olana atrehantsika rehefa te hiverina amin'ny kinova Android taloha izahay, satria tsy mora ny mahita ireo ROM manokana momba ireo terminal.
Raha smartphone izany Samsung, ny vahaolana dia tena tsotra, satria ao amin'ny tranokalan'i SamMobile (tranokala nifantoka tamin'i Samsung nandritra ny folo taona mahery), afaka mahita ny kinova rehetra efa nisy izahay sy ireo terminal Android rehetra an'ity mpanamboatra ity.
Raha Pixel ny terminal anao dia azo atao ny mahita ny ROM amin'ny alàlan'ny pejy web samihafa izay mifantoka amin'ireo terminal ireo. Mihasarotra ihany ny raharaha raha toa ka avy amin'ny mpanamboatra hafa ny terminal, na dia tsy azo atao aza izany. Ao amin'ny tranonkalan'ny XDA Developers Azonao atao ny mahita ny ROM an'ny terminal maro, farafaharatsiny ny mpivarotra tsara indrindra, miaraka amin'ny torolàlana hanatanterahana ny fizotrany.
Pejin-tranonkala mahaliana iray hafa izay tsy maintsy raisintsika rehefa miresaka mitadiava kinova Android taloha avy amin'ny terminal hafa ankoatran'ny Samsung dia HTCmania, iray amin'ireo forum malaza indrindra amin'ny Espaniola amin'ny telefaona finday.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Ahoana ny famerenana amin'ny laoniny ny Android taloha